Dowladda Shiinaha Oo Dhoolatus Millateri Ka Sameysay Meel U Dhow Xeebaha Somaliland, Kadib Xidhiidhka Ay Somaliland La Yeelatay Taiwan – somalilandtoday.com
(SLT-Hargeysa)-Dowladda Shiinaha ayaa dhoolatus ciidan oo balaadhan ka sameeysay meel aan wax badan u jirin badda Somaliland, xili ay xidhiidhka cusub yeesheen Somaliland iyo Taiwan.
Dhoolatuska Millateriga Shiinaha ayaa loo arkaa mid hanjabaad nooc cusub ah oo ku socota Somaliland oo uu rumeysan yahay inay qeyb ka noqoneysa kala goynta dhul weynihiisa, wallow ayna labada arrin si rasmi ah iskula xidhiidhin dowladda Shiinuhu.
Sidoo kale waxa dadka ka faallooda arrimaha diblumaasiyadda ay dhoollatuska Shiinaha ku macneeyen fal uu ku muujinayo cadhadiisa iyo diidmada xidhiidhka cusub ee Taiwan iyo Somaliland.
Shiinaha ayaa si adag uga horyimid xidhiidhka ay Somaliland la sameysatay Taiwan, oo uu aaminsan yahay inay tahay Jasiirad ka tirsan dhul weynihiisa, halka ay iyadu ku doodeyso inay tahay dal madax-banaan.
Dhan kale dawladda Maraykanka ayaa si weyn u soo dhawaysay xidhiidhka cusub ee Taiwan iyo Somaliland.